အားလုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားစေပါဒါကကိုးအများစုဟာစိတ်ပျက်စရာအမှား - သတင်း Rule
mistimed မှစ. ဂိမ်းတွေလည်းရှိတတ်တယ်ကယ်ဖို့ခုန်, ဒီနေရာမှာငါတို့ရှိသမျှသည်အထပ်ထပ်စေဂိမ်းအမှားများဖြစ်ကြသည်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “အားလုံးဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူလုပ်သောကိုးအများဆုံးစိတ်ရှုပ်စရာအမှားတွေ” ကိသ်ဖြစ်သူ Stuart ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com သောကြာနေ့ 1st April လပေါ်များအတွက် 2016 08.04 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ကျနော်တို့လေ့လုပ်သောသူအချို့အမှားတွေရှိပါတယ်. ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်မကူညီနိုငျ. ကျွန်တော်လုပ်နေလုပ်နေသကဲ့သို့, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအော်ဟစ်နေသည်: "ဒါဟာလုံးဝလုပ်ဖို့မှားအရာဖြစ်၏။ " ဒါပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့, ကျွန်တော်သိမီက, ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြုသွားပြီင်; ကျွန်တော်တို့ Batman းက Superman မြင်ရဖို့လက်မှတ်ဝယ်ပြီးပြီ.
တခါတရံမှာသူတို့အမှုအရာလည်းဂိမ်းထဲမှာဖြစ်ပျက်. သငျသညျ Duty ၏ခေါ်ဆိုမှုမှာဘယ်လောက်အတွေ့အကြုံကြောင့်အရေးမပါဘူး, သင်ဗီဒီယိုကလစ်၌သင်တို့၏ပစ္စတိုနှစ်ဦးကျည်ဆံနှင့်အတူသူတို့ကိုအားသွင်းခြင်းဖြင့်တစ်ကြိမ်မှာအများအပြားအဝင်ကစားသမားထဲကယူနိုင်ပါတယ်ထင်အချိန်လေးရှိပါတယ်. သင်တို့အဘို့အ Tomb Raider ဂိမ်းကစားခဲ့ကြရတယ်ရင်တောင် 10 သင်ဆဲရံဖန်ရံခါတစ်အလွန်ကြီးမားသောတွင်းနက်မှတက်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ထင်ပါလိမ့်မယ်အနှစ်, Lara ကဆြုံးရှင်သန်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတွေးမိ? ပြီးတော့သူမတတ်နိုင်သမျှကြောင်းတွေ့ရှ. ထိုနောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးဂိတ်အများအပြားမိုင်ပြန်ခဲ့.
ဒီမှာ, ထိုအခါ, သမိုင်းတလျှောက်လုံးကနေတချို့ဂန္ဂိမ်းအမှားများဖြစ်ကြသည်. မှတ်ချက်များအပိုင်း၌သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင် "အကြိုက်ဆုံး" Add.
အဆိုပါ misjudged ခုန်
တစ်ဦးကဂန္မာရီယိုကဆြုံး. ဓါတ်ပုံ: ကို Nintendo
ဒါက archetypal ပလက်ဖောင်းအမှားဖြစ်ပါသည်: သင်သိ မရ မာရီယိုရဲ့ခြေတစ်ခုတည်း pixel အစွန်းကျော်အထိခုန် hit - ထိုအခါမူကားပြေးတက်နေစဉ်အတွင်း, အ adrenaline ဝင်သွားပါသည်, သင်ပင်ကသိရှေ့၌သင်တို့လက်ချောင်း twitching စတင်, သင် button ကိုနှိပ်ပါတယ် … ဝေးစောလွန်း, အနက်ဆုံးသောတွင်းသို့ဇောက်ချပါဝင်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ moustached သူရဲကောင်းပေးပို့ခြင်း. 24 အချိန်များအတွက်. သင်ကသင့်ရဲ့လက်ဗလာနှင့်တစ်ဝက်တွင်တစ်ဦးစူပါကို Nintendo Controller ကိုဖမ်းယူဖို့ဖြစ်နိုင်ပါလျှင်အံ့သြအကြီးအကျယ်ညည်းတွား.
YouTube အဗီဒီယိုမှ Volkswagon မောင်းနှင်မှုအမှား, Gran Turismo V ကိုပျက်စီးမှုများ
"အင်း, ထိုသို့ဖြစ်လျှင့်အထွတ်ရှေ့တော်၌ထိုဘရိတ် hit 115mph မှာဒီ hairpin အလှည့်ချဉ်းကပ်ဖို့ဒဏျကွေးလိမ့်မယ်, ဖြစ်နိုင်သည်အဘယျသို့သှားနိုငျ … ဘုရားရေ, ငါ၏အကားတစ်ရေး-off ဖြစ်ပါတယ်။ "
သငျသညျနှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့အ Ryu အဖြစ်ကျင့်သုံးခဲ့ကြရတယ်, သင်တို့ရှိသမျှသည်မိမိ key ကိုရွေ့လျားသိ, သငျသညျကိုပငျ Controller ကိုကြည့်မပါဘဲသူတို့ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်. သို့ပြုလျှင်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ဦး Street Fighter ပြိုင်ပွဲများအတွက်ကျော်လာ, သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏ကြီးကျယ် combo တိုက်ခိုက်မှုနှင့်အတူအဆင်သင့်, တော်တော်များများလေးပုံတပုံစက်ဝိုင်းအလှည့နှင့်ထိုးကြိတ်တစ်ခုခင်းကျင်းပတျသကျ. ယခုအချိန်တွင်လာ. Ryu ဘုန်းပွင့်ဖြစ်လိမ့်မည်. Ryu အောင်မြင်သောဖြစ်လိမ့်မည်. Ryu အလိုတော် … အထူးကြပ်မတ်လေ့ကျင့်ရေးသင်တို့၏များစွာသောနာရီ၌သငျတို့ရှေ့မှာတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့လိုက်တယ်နည်းနည်းဆတ်တောက်ခြင်းကခုန်ပြုပါ. ken မျက်နှာ၌စတင်ကျင်းပ. ken အနိုင်ရ.
"သင်အကြားညှစ်ဖို့ပဲလွန်းကျဉ်းမြောင်းဖြစ်ကြောင်းဘားနှင့်အတူထောင်ထဲဆဲလ်၌ရှိကြ၏,"သင်မယ့်သင့်ရဲ့ ZX Spectrum အဘို့ကိုဝယ်ပါတယ်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသစ်သော graphical စွန့်စားမှုကပြောပါတယ်. "သင်၏ရှေ့မှောက်၌ဇယားကိုတွင် '' ကျဉ်းမြောင်းဆေး '' label တပ်ထားသောတစ်ပုလင်းဖြစ်ပါသည်. ယခုအဘယျသို့?"ပတ်များအတွက်, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောကြိယာ-နာမ်ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်း: သောက်ဆေး, ဆေးလောင်, ငုံဆေး, quaff ဆေး. နောက်ဆုံးမှာ, စိတ်ပျက်၏သင့်ရဲ့ sobs ရေးဆွဲ, သင့်မိသားစု၏ကျန်ပါဝင်ပတ်သက်ရရှိ. "သင် '' ရှင်းပြသည် '' ကြိုးစားခဲ့ဖူး,"သင်၏ grandad Hitchen တညဉ့်ကနေဖုန်းကိုကျော်ကပြောပါတယ်. အဘယ်အရာကိုမျှအကျင့်ကိုကျင့်.
အနှစ်သုံးဆယ်နောက်ပိုင်းမှာသင်တစ်ဦး emulator အပေါ်ဂိမ်းကိုရှာဖွေ. သင်ကတက် load, ရိုက် "ပျံဆေး", နှင့်သင်တစ်ဦးလက်ငင်းအတွက်လာမည့်အခန်းအားင်. သငျသညျတိတ်တဆိတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှထပ်ကျော့နာရီပေါင်းများစွာများအတွက် Monitor ကိုစေ့စေ့, "ကျွန်မငယ်စဉ်ကလေးဘဝဖြုန်း".
YouTube အဗီဒီယိုမှခေါ်ဆောင်သွား, အိမ်တွင်းမကောင်းဆိုးဝါး2ဖုတ်ကောင်အံ့အားသင့်စရာတိုက်ခိုက်
ဒါဟာဒဏ်ငွေင်, ကအားလုံးကိုဒဏ်ငွေင်. သငျသညျငါးကျည်ဆံများ, သင်သည်သင်၏ဓါးများ, နှင့်ဘာမှအနာသငျသညျလျှင်, သုံး medipaks နောက်ကျောရှိ antechamber ရှိ. ဒီ unexplored ဧရိယာသို့သွားကြဖို့ဿုံဘေးကင်းလုံခြုံဒါဟာင် … အံ့အားသင့်စရာ Zombies! အိုးချိုမြိန်သညျယရှေု, ရည်ရွယ်ချက်မှာ button ကိုအဘယျသို့င်? ရည်ရွယ်ချက်မှာခလုတ်ကိုဘာလဲ?! အဘယ်သူမျှမအိုး, သငျသညျအစားပစ္စတို၏အမွေး duster တပ်ဆင်ထားပါတယ် - သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ပင်သင့်ရဲ့စာရင်းထဲမှာခဲ့? အဆိုပါဖုတ်ကောင်ပိုမိုနီးကပ်စွာ edging ဖြစ်ပါတယ်. သင်ရုံနှင့်အတူသေနတ်ပေါင်းစပ်နိုင်လျှင် … သိပ်နောက်ကျသွားပြီ.
သငျသညျဂုဏျတငျ၏ခေါ်ဆိုမှုကစားကြသည်: ခေတ်သစ်တိုက်ပွဲများ. "ဟေ့ငါကဒီလက်ပစ်ဗုံးနှင့်အတူရန်သူတစ်ဦးတပြင်လုံးကိုအခန်းထဲကယူနိုင်ပါတယ်," သင်ထင်ပါသလား. "ငါသည်ကိုယ့်ချုပ်ဖို့ကလို … အပစ် button ကိုအဘယျသို့င်စောင့်ဆိုင်း? အိုဟုတ်တယ်, ဒါပဲ. အိုကေ, ဒီကိုစား! အဘယ်သူမျှမအိုး, ထိုလက်ပစ်ဗုံးပဲငါ့ဦးခေါင်းအထက်တစ်ဦးဟာအရင်ကမမြင်ရတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာကို bounce off ခဲ့ပြီးယခုငါ့ခြေရင်း၌မုသာစကားကိုဖြစ်ပါတယ်. ငါကကောက်နောက်တဖန်ပစ်ရန်အချိန်ရှိသည် Do?" [အသံကျယ်ပေါက်ကွဲမှု၏အသံ] "ဘယ်သူမျှမက. မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မဟုတ်ပါ။"
Lorenzo ကော်စတာအားဖြင့်တစ်ဦးကဖျော်ဖြေပွဲ. နေချင်စဖွယ်ပန်းချီကား, မကောင်းဘူးလို့ဇာတ်ကောင်အတန်းအစား.
ဓါတ်ပုံ: အမွေအနှစ်ပုံများ / Getty Images
သငျသညျင် 20 နောက်ဆုံးနဂါးဒဏ္ဍာရီ XVII ဆိုတဲ့ကျယ်ပြန့်အခန်းကဏ္ဍကို-ကစားစွန့်စားမှုသို့နာရီ. At the beginning, the game let you select fromanumber of different character classes; you could have gone for Mighty Warrior, Wise Sage, Eagle-Eyed Archer or Dread Warlock. But you didn’t. Feeling impish and contrary, you opted for “Wandering Minstrel”. အခုတော့, facingagigantic Level 40 hell dragon whose fiery breath has just destroyedalarge village, your decision is looking much less amusing. You desperately search through your special powers for the most devastating option. It turns out to be “plaintive ballad”. It fails.
Oregon Trail ဓါတ်ပုံ: Oregon Trail
You can definitely get past this section of the game before saving, it’ll be no problem. ငါဆိုလိုတာက, all you have to do is slaughter the orc army, then dodge the poison arrow traps, then take on the end-of-level boss monster.
But four hours later, the boss kills you – with onlyasliver of health left on its own life gauge. “Restart from last save?” sneers the game menu. Some part of your brain allows you to fantasise that you actually ကိုပြု hit save, right after slaughtering that 300th orc warrior.
Taking from YouTube video, ဖီဖာ 15 Chip Shot Fail
It’s the last few seconds of your Fifa 16 match between Norwich and Barcelona. The score is 1-1, but your striker is charging toward the Barca penalty box with no defenders nearby andaclear shot on goal. You’re about to take the champions league title back to East Anglia, but more importantly you’re seconds away from beating your best friend who always plays as Barcelona – and always wins. But not this time. Not this time, Messi. It’s all over, င်း … ဟေး, why not chip the goalie? He’s off his line, he’s foundering, you know the right buttons – what better way to underline the immensity of your impending achievement? They’ll be talking about this for years. You press the Skill Moves button and shoot.
The ball sales over the cross bar. The whistle blows. After extra time, Norwich loses on penalties. For the rest of the week, whenever your mate sees you eating, she asks: “Do you want chips with that?” You think perhaps this friendship has run its course. လည်း, you may never play video games again.
27222	8 အပိုဒ်, ယဉ်ကျေးမှုကို, အင်္ဂါရပ်များ, ဂိမ်းယဉ်ကျေးမှု, အားကစားပြိုင်ပွဲ, ကိသ်ဖြစ်သူ Stuart, ကို Nintendo, PC ကွန်ပျူတာ, Play Station က, retro ဂိမ်း, Role playing games, Shoot 'em ups, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ, Xbox ဂိမ်း
← ထိပ်တန်း 20 iPhone နဲ့ iPad App များနှင့်လ၏အားကစားပြိုင်ပွဲ Logitech သဟဇာတ Elite ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း →